Nagu saabsan - LANGFANG OLAN GLASS BEADS CO., LTD
Waxaa la aasaasay 2010, LANGFANG OLAN Glasas BeadS CO., LTD waa soo saare xirfadle ah oo kuul ku leh Shiinaha, oo leh teknolojiyad wax soo saar oo horumarsan, shirkaddu waxay aragtay sanad kororka sanadka ilaa ganacsiga guuleysta maanta. Waxaan soosaari karnaa kuuliyo kala duwan oo loogu talagalay nabadgelyada waddada iyo ujeeddada warshadaha. Shirkadduna waxay u heellan tahay warshadaha nabadgelyada waddooyinka iyada oo ujeedadeedu tahay khabiir ku takhasusay nabadgelyada waddooyinka.
Amaahda Marka Hore
Qiime macquul ah
Alaabtayada Ugu Weyn
Waxyaabaheena ugu muhiimsan waa kuul muraayadaha milicsiga ee calaamadeynta wadada, kuul quraarado kuleyl ah, microspheres muraayad godan, kuul shiidan, kuul muraayadaha dhaadheer, guluubka muraayadda tusmada sare leh iyo kuul muraayadaha midabka leh. Muraayadaha muraayadaha milicsiga ee calaamadeynta waddooyinka ayaa ka mid ah wax soo saarka ugu caansan, iyadoo la adeegsanaayo qalabka ugu tayada sarreeya calaamadeynta, waxaan ku siineynaa cimri dherer, nabadgelyo iyo aragti sannadka oo dhan, iyadoo kuul guluubyo ay ku jiraan alaabteenna si ay u iftiimaan habeenka oo dhan.
Iyadoo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah soo-saarista iyo dhoofinta, wax-soo-saarku wuxuu ku guuleystay sumcadda wanaagsan ee suuqa caalamiga ah ee tayada sare iyo qiimaha tartanka. Wax soosaarkeena ayaa si joogto ah loo dayactiray, loo hagaajiyay oo loo kordhiyay awooda si loo daboolo baahida sii kordheysa ee alaabteena. Hirgelinta socota ee nidaamyada waxsoosaarka ayaa muhiim u ah taageerada na siinta si loo gaaro ISO 9001: Shahaadada 2015.
Iyadoo lagu saleynayo horumarinta tikniyoolajiyadda, shirkaddu waxay fiiro gaar ah u yeelan doontaa maareynta aasaasiga ah, tayada xasilloon, si joogto ah u hagaajinaysa adeegyada iibka ka hor, iibka iyo adeegyada iibka ka dib, iyo kor u qaadista tartanka suuqa ee alaabteenna. Tan iyo aasaaskii, shirkaddu waxay haysaa aaminaadda "deynta ugu horreysa, macaamiisha u janjeedha, tayada ugu fiican iyo qiimaha macquulka ah". Waxaan sugeynaa inaan ka maqalno adiga iyo waxtarkaaga qiimaha leh ee horumarkayaga mustaqbalka. Waxaan bixin doonaa adeegga macaamiisha ugu sarreeya iyo jawaab celinta. Waad ku mahadsan tahay ganacsigaaga iyo taageeradaada! Langfang Olan Glass Beads Co., Ltd ayaa had iyo jeer kuu noqon doonta ilaaliyahaaga jidka.